Maxkamadda Sare ee Venezuela oo la weeraray – Balcad.com Teyteyleey
Maxkamadda Sare ee Venezuela oo la weeraray
Xarunta Maxkamadda Sare ee Venezuela oo la weeraray “SAWIRRO” Diyaarad nooca qumaatiga u kaca, ayaa gelinkii dambe ee Talaadadii lagu weeraray Xarunta Maxkamadda Sare ee dalka Venezuela, waxaana la maqlay qaraxyo is xig xigay oo dhinaca Maxkamadda loo riday.
Muuqaal lagu baahiyay barraha Internet-yada, ayaa muujinaya diyaaradda oo ku dul wareegeysa Dhismaha Xarunta Maxkamadda ee Magaalada Caracas, ka hor intii aan halkaasi laga maqlin qaraxyo. Sarkaal Militariga ka tirsan oo la wareegay maamulka diyaaradda, ayaa baahiyay war qoraal ah oo uu ku baqayo in tallaabo laga qaado waxa uu ugu yeeray dowlad dembiile ah. Nicolas Maduro, Madaxweynaha Venezuela, ayaa sheegay in diyaarad helicopter ah oo boolisku leeyihiin ay weerartay Xarunta Maxkamadda Sare.
Madaxweynaha Venezuela, ayaa sheegay in Sarkaal Militariga ka tirsan uu soo afduubtay diyaaradda, isla-markaana uu bamboonooyin ku riday Xarunta Maxkamadda. Madaxweynaha, ayaa waxaa uu weerarkaasi ku tilmaamay fal argagixiso, isagoona ku goodiyay in ciidamada ammaanku ay soo qaban doonaan kuwii falkaasi ku kacay.
Ma jirto wax khasaaro ah oo la sheegay in weerarkaasi uu ka dhashay, illaa iyo hadda inta laga warqabo. Waxay dhacdadani ku soo aadaysaa, xilli muddo laba bilood ay dalkaasi ka soconayan dibadbaxyo looga soo horjeedo Madaxweyne
The post Maxkamadda Sare ee Venezuela oo la weeraray appeared first on Ilwareed Online.
Dowlada Imaaraadka Carabta oo ku hanjabay inay cunaqabateyn dheeri ah ku soo..
Amarkii M/W Trump oo maanta dhaqangalaya….